Qr Code Sticker Fomba vaovao hamaritana ny fiaranao na aiza na aiza! Ao amin'ny www.krungsriautomarketplace.com izay ahafahanao mandefa mivarotra ny fiarao ary hamokatra QR Code Sticker miorina amin'ny adiresy tranonkala tokana misy anao ianao, miaraka amin'ny endrika fametahana nofidinao, avy eo ampitao amin'ny toerana misy anao mba hahafahanao mametaka ny sticker amin'ny fiarao! !! Ho an'ny Buyer fotsiny, tsindrio fotsiny ny QR Code hitanao ao amin'ny fiantsonan'ny fiara an'ny Seller any amin'ireo fivarotana fivarotana, fivarotana kafe, tranobe, sns. Fidirana amin'ny antsipirian'ny fiara. Antsoy ilay mpivarotra ary kitiho izany. Mitranga tampoka eo daholo eo amin'ny toerana misy anao roa daholo ny rehetra !!!
Ny Rafitra Fanadiovana Rano Laboratoara
Ny Rafitra Fanadiovana Rano Laboratoara Purelab Chorus no rafitra fanadiovana rano modular voalohany natao hifanaraka amin'ny filan'ny laboratoara manokana sy ny habaka. Izy io dia manome ny mari-pahaizana rehetra amin'ny rano manadio, manome vahaolana azo anaovana sy mahamora ary ilaina. Ny singa maoderina dia azo zaraina manerana ny laboratoara na mifamatotra amin'izy ireo amin'ny endrika endrika tokana miavaka, manamaivana ny dian'ny rafitra. Ny fifehezana Haptic dia manome ny fivezivezena mikraoba be loatra voafehy, ary ny hazavana kosa dia manondro ny toeran'ny Chorus. Ny teknolojia vaovao dia manome an'i Chorus ho rafitra mandroso indrindra indrindra, mampihena ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy ny vidin-javatra.
Vivit Collection Ny Kavina Sy Peratra Zoma 17 Septambra
FinaMill Ny Lakozia Matanjaka Ao An-Dakozia Alakamisy 16 Septambra
Catzz Fandriana Saka Alarobia 15 Septambra
Qr Code Sticker Ny Fitaovana Fanabeazana Sy Fanofanana Portable Ultrasound Detector Ny Rafitra Fanadiovana Rano Laboratoara Ny Chandelier Ny Programa